သှားကနျြးမာရေးအတှကျ သိရှိထားသငျ့တဲ့ အခကျြ (၉) ခု – One Daily Media
သှားကနျြးမာရေးအတှကျ သိရှိထားသငျ့တဲ့ အခကျြ (၉) ခု
သှားကနျြးမာရေးက ခန်ဓာကိုယျတခုလုံးရဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သှားကနျြးမာရေးကို အသေးစိတျ ဂရုပွုသငျ့ပါတယျ။
1. အစားစားပွီးရငျ ခကျြခငျြး သှားမတိုကျသငျ့ပါဘူး။
အစားစားပွီးရငျ ခကျြခငျြးသှားတိုကျတာက သှားအပျေါယံ ကွှသှေားတှကေို ပကျြစီးစပေါတယျ။ အစားအစာတှေ၊ အရညျတှကေ ပါးစပျက ph ညီမြှမှုတှကေို အနှောငျ့အယှကျပေးပွီး သှားအပျေါယံကွှသှေားတှကေို အခြိနျတိုအတှငျး ပါးသှားစပေါတယျ။ သှားဆရာဝနျတှကေ အစားစားပွီး အနညျးဆုံး မိနဈ 30, 40 ကွာမှ သှားတိုကျဖို့ အကွံပေးပါတယျ။
2. သှားကနျြးမာရေးအတှကျ ရကေူးတာမကောငျးပါဘူး။
ရကေူးခွငျးက ကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးပွုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရကေူးကနျထဲမှာ ထညျ့ထားတဲ့ ပိုးသတျဆေးက သှားကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ 1980 နှဈတှတေုနျးက ရကေူးသူတှရေဲ့ သှားကနျြးမာရေးကို လလေ့ာတဲ့အခါ 40 ရာခိုငျနှုနျးသော ရကေူးသူတှကေ သှားအပျေါယံကွှသှေားလှာတှေ ပကျြစီးပါတယျ။
3. ကျောဖီကို ဖြျောထားပွီး အခြိနျကွာမှ မသောကျသငျ့ဘူး။
လူအမြားစုက အလုပျမှာဆိုရငျ ကျောဖီကို နညျးနညျးသောကျလိုကျ၊ အလုပျလုပျလိုကျ၊ စကားပွောလိုကျနဲ့သောကျတတျကွပါတယျ။ ကျောဖီဖြျောထားပွီး အခြိနျကွာမှသောကျရငျ သှားအပျေါယံကွှသှေားလှာတှကေို ပကျြစီးစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ကျောဖီကို ဖြျောပွီးရငျ မွနျမွနျသောကျသငျ့ပါတယျ။
4. ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ သှားကို စဈဆေးပေးသငျ့ပါတယျ။
သှားအခေါငျးပေါကျ ဖွဈနတေဲ့အခါ ကူးစကျရောဂါတှကေ သှားတဈရှူးတှကေနေ သှားဖုံးအထိ ပြံ့နှံ့ပါတယျ။ အဲဒီကနေ သှေးကွောထဲရောကျပွီး သန်ဓသေားကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ ကလေးမှေးဖှားတဲ့အခါ ကလေးမှာ ဝမျးတှငျးပါရောဂါတှေ ပါလာတတျပါတယျ။ သှားဖုံးရောငျရမျးခွငျးက အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီးနှဈယောကျလုံးရဲ့ မြိုးပှားနိုငျစှမျးကို လြော့စပေါတယျ။ ကလေးမှာလညျး လမစဘေဲ့မှေးတာ၊ ပေါငျခြိနျမပွညျ့ဘဲ မှေးတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
5. ကလေးတှေ သှားတိုကျခြိနျမှာ သီခငျြးဖှငျ့ထားပေးပါ။
သှားတိုကျတဲ့အခြိနျမှာ သသေခြောခြာ အာရုံစိုကျပွီး တိုကျဖို့လိုပါတယျ။ ကလေးတှေ သှားတိုကျခြိနျမှာ သူတို့အကွိုကျ သီခငျြးလေးတှေ ဖှငျ့ပေးဖို့ ဆရာဝနျတှကေ အကွံပေးပါတယျ။ သီခငျြးက2မိနဈ၊3မိနဈ ကွာတာဖွဈလို့ ကလေးက သှားကို သသေခြောခြာ တိုကျနိုငျမှာပါ။
6. ပဲတှကေ သှားတှကေို ပကျြစီးစပေါတယျ။
ပဲမှာပါတဲ့ ပရိုတိနျးဓာတျက ဆဲလျတှကေို ပွိုကှဲစပေါတယျ။ သှားမှာအခေါငျးပေါကျ ဖွဈနတေဲ့အခြိနျ ပဲစားတဲ့အခါ သှားဖုံးရောငျတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သှားမှာ အခေါငျးပေါကျဖွဈနရေငျ ပဲမစားသငျ့ပါဘူး။
7. ခံတှငျးကနျြးမာရေးက မှတျဉာဏျနဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။
သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ အသကျ 55 နှဈနဲ့ အထကျ လူပေါငျး 273 ယောကျကို သုတသေနပွုခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခါ သှားမြားမြား ကြိုးတဲ့သူတှကေ မှတျဉာဏျတှခြေို့ယှငျးတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သှားကနျြးမာရေးက အရေးကွီးပါတယျ။
8. ဖြားနာခွငျးက ကလေးတှရေဲ့ သှားအနအေထားကို ပွောငျးစတေယျ။
ကလေးတဈယောကျက တဈနှဈမှာ တဈကွိမျ၊ နှဈကွိမျဖြားတာက ပုံမှနျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကလေးဘဝတုနျးက ခဏခဏနမေကောငျးဖွဈရငျ ကနျြးမာရေးမှာ ပွဿနာရှိနိုငျပါတယျ။ ကလေးတှကေ ဖြားတဲ့အခါ နှာခေါငျးနဲ့ အသကျရှူလို့မရဘဲ ပါးစပျနဲ့အသကျရှူရပါတယျ။ အဲဒီအခါ အောကျမေးရိုးက ရှကေို့ နညျးနညျးတိုးသှားပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အသကျရှူတဲ့အခါ နှာခေါငျးက အဆငျပွဖေို့ လိုတယျလို့ သှားဆရာဝနျတှကေ အကွံပေးပါတယျ။
9. ရခေဲတုံးတှကေို ကိုကျစားခွငျး၊ လြှာမှာအပေါကျဖောကျခွငျးတှကေ သှားကနျြးမာရေးအတှကျ မကောငျးပါဘူး။
ရခေဲတုံးတှကေို ကိုကျစားခွငျးက သှားအပျေါယံကွှသှေားနဲ့ သှားဖုံးတှကေို ထိခိုကျစပေါတယျ။ လြှာမှာ အပေါကျဖောကျပွီး တပျထားတဲ့သတ်ထုတှကေ သှားကိုထိခိုကျစပေါတယျ။ မုနျ့တှေ၊ ဖြျောရညျဘူးတှကေို ဖောကျတဲ့အခါ သှားနဲ့ကိုကျပွီး မဖောကျသငျ့ပါဘူး။
သွားကျန်းမာရေးအတွက် သိရှိထားသင့်တဲ့ အချက် (၉) ခု
သွားကျန်းမာရေးက ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သွားကျန်းမာရေးကို အသေးစိတ် ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။
1. အစားစားပြီးရင် ချက်ချင်းသွားမတိုက်သင့်ပါဘူး။
အစားစားပြီးရင် ချက်ချင်းသွားတိုက်တာက သွားအပေါ်ယံကြွေသွားတွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ အစားအစာတွေ၊ အရည်တွေက ပါးစပ်က ph ညီမျှမှုတွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီး သွားအပေါ်ယံကြွေသွားတွေကို အချိန်တိုအတွင်း ပါးသွားစေပါတယ်။ သွားဆရာဝန်တွေက အစားစားပြီး အနည်းဆုံး မိနစ် 30, 40 ကြာမှ သွားတိုက်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
2. သွားကျန်းမာရေးအတွက် ရေကူးတာမကောင်းပါဘူး။
ရေကူးခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေကူးကန်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးက သွားကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ 1980 နှစ်တွေတုန်းက ရေကူးသူတွေရဲ့ သွားကျန်းမာရေးကို လေ့လာတဲ့အခါ 40 ရာခိုင်နှုန်းသော ရေကူးသူတွေက သွားအပေါ်ယံကြွေသွားလွှာတွေ ပျက်စီးပါတယ်။
3. ကော်ဖီကို ဖျော်ထားပြီး အချိန်ကြာမှ မသောက်သင့်ဘူး။
လူအများစုက အလုပ်မှာဆိုရင် ကော်ဖီကို နည်းနည်းသောက်လိုက်၊ အလုပ်လုပ်လိုက်၊ စကားပြောလိုက်နဲ့သောက်တတ်ကြပါတယ်။ ကော်ဖီဖျော်ထားပြီး အချိန်ကြာမှသောက်ရင် သွားအပေါ်ယံကြွေသွားလွှာတွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကော်ဖီကို ဖျော်ပြီးရင် မြန်မြန်သောက်သင့်ပါတယ်။
4. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သွားကို စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။
သွားအခေါင်းပေါက် ဖြစ်နေတဲ့အခါ ကူးစက်ရောဂါတွေက သွားတစ်ရှူးတွေကနေ သွားဖုံးအထိ ပျံ့နှံ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေ သွေးကြောထဲရောက်ပြီး သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါ ကလေးမှာ ဝမ်းတွင်းပါရောဂါတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။ သွားဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းက အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို လျော့စေပါတယ်။ ကလေးမှာလည်း လမစေ့ဘဲမွေးတာ၊ ပေါင်ချိန်မပြည့်ဘဲ မွေးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
5. ကလေးတွေ သွားတိုက်ချိန်မှာ သီချင်းဖွင့်ထားပေးပါ။
သွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာ သေသေချာချာ အာရုံစိုက်ပြီး တိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကလေးတွေ သွားတိုက်ချိန်မှာ သူတို့အကြိုက် သီချင်းလေးတွေ ဖွင့်ပေးဖို့ ဆရာဝန်တွေက အကြံပေးပါတယ်။ သီချင်းက2မိနစ်၊3မိနစ် ကြာတာဖြစ်လို့ ကလေးက သွားကို သေသေချာချာ တိုက်နိုင်မှာပါ။
6. ပဲတွေက သွားတွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
ပဲမှာပါတဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်က ဆဲလ်တွေကို ပြိုကွဲစေပါတယ်။ သွားမှာအခေါင်းပေါက် ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ပဲစားတဲ့အခါ သွားဖုံးရောင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သွားမှာ အခေါင်းပေါက်ဖြစ်နေရင် ပဲမစားသင့်ပါဘူး။
7. ခံတွင်းကျန်းမာရေးက မှတ်ဉာဏ်နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အသက် 55 နှစ်နဲ့ အထက် လူပေါင်း 273 ယောက်ကို သုတေသနပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သွားများများ ကျိုးတဲ့သူတွေက မှတ်ဉာဏ်တွေချို့ယွင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သွားကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပါတယ်။
8. ဖျားနာခြင်းက ကလေးတွေရဲ့ သွားအနေအထားကို ပြောင်းစေတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်က တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ဖျားတာက ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကလေးဘဝတုန်းက ခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်ရင် ကျန်းမာရေးမှာ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေက ဖျားတဲ့အခါ နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူလို့မရဘဲ ပါးစပ်နဲ့အသက်ရှူရပါတယ်။ အဲဒီအခါ အောက်မေးရိုးက ရှေ့ကို နည်းနည်းတိုးသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသက်ရှူတဲ့အခါ နှာခေါင်းက အဆင်ပြေဖို့ လိုတယ်လို့ သွားဆရာဝန်တွေက အကြံပေးပါတယ်။
9. ရေခဲတုံးတွေကို ကိုက်စားခြင်း၊ လျှာမှာအပေါက်ဖောက်ခြင်းတွေက သွားကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူး။
ရေခဲတုံးတွေကို ကိုက်စားခြင်းက သွားအပေါ်ယံကြွေသွားနဲ့ သွားဖုံးတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ လျှာမှာ အပေါက်ဖောက်ပြီး တပ်ထားတဲ့သတ္ထုတွေက သွားကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ မုန့်တွေ၊ ဖျော်ရည်ဘူးတွေကို ဖောက်တဲ့အခါ သွားနဲ့ကိုက်ပြီး မဖောက်သင့်ပါဘူး။